३५ हजार तलब, ४० लाखको बाईक, वाह जिन्दगी ! - Sidha News
३५ हजार तलब, ४० लाखको बाईक, वाह जिन्दगी !
तपाई सफल कि असफल मान्छे ?
म आफूलाई सफल मान्छे जस्तो लाग्दैन । मैले मेरा धेरै कमी कमजोरीहरुको महसुस गरेको छु । र, हरेक दिन ती कमी कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै म मेरा आइडियाहरुमा सफलतातर्फ अघिबढ्छु ।
अनि तपाईँ रिसाहा कि समझदार ?
म कमै रिसाउँछु । म आफूलाई समझदार नै छु जस्तो लाग्छ । बिजनेशमा एग्रेसिभ नेचर नै राम्रो हुन्छ । तर, म अलि बढी नै शान्त स्वभावको छु जस्तो लाग्छ ।
प्रेम कहानी सुनायो भने श्रीमतिको धेरै गाली पाइन्छ । भो त्यसैले नसुनाउँ होला ।
प्राय व्यापारीहरु अलि ठूलो भूँडी भएका मोटाघाटा हुन्छन् । तपाईँत के सारो दुब्लो ?
१० वर्षअघि म निकै धेरै मोटो थिएँ । त्यसबेला श्रीमती सुत्केरी भएकि थिइन् । हाम्रो नेवारी समुदायमा सुत्केरीलाई ध्यू चाकु कोशेली ल्याउने चलन छ । श्रीमतीलाई सुत्केरीमा आएका ती कोशेली म खाइदिन्थेँ । त्यही भएर मोटाएको ९६ किलोसम्म पुगेँ । अचेल घटेर ८२ किलो भएको छु । पहिला श्रीमति मोटी थिइन् र म पनि मोटो हुँदा सुहाउँथ्यो । अहिले श्रीमति पातली भएकी छिन् त्यसैले सुहाउनलाई म पनि पातलै हुनुपर्यो ।
र, अब उमेर पनि बढ्दै गयो । बुढो भइँदै गइयो । त्यसैले स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्दै जानुपपर्छ भनेर हरेक बिहान एक्सरसाइज गर्छु ।
भर्खर त ४२ वर्षको भयो । यो उमेरमै बुढो भन्न मिल्छ र ?
अब चुनाव लागिरहेको छ । त्यसैले बुढो भइयो भनेर भन्नै पर्यो नि । नत्र त चुनाब जितिँदै जितिँदैन नि । हाहाहा… (लामो हाँसो)
तपाईँ आफ्नो कम्पनीबाट तलब लिनुहुन्छ कि नाफामात्रै ?
बेसिक तलब लिन्छु । डिभिडेन्ड त आइहाल्छ नै । मेरो तलब तपाइँको भन्दा कम होला ।
तपाईको तलब कति हो त ?
मासिक ३५ हजार रुपैयाँ जति लिन्छु ।
नाफा कति नि ?
नाफा भए न डिभिडेन्ड आउने हो ।
तलब त मासिक ३५ हजार रुपैयाँ भयो खर्च चैं कति नि ?
खर्च कति छ भनेर त मैले हेरेकै छैन । जे होस् पुगिरहेको छ । घर चलिरहेको छ । तपाईँलाई साँच्चै भनु कि मेरो खल्तीमा पैसा नै हुँदैन । कहिलेकाहीँ श्रीमतीसँग मुभि हेर्न जाँदा खल्तीमा पैसा हुँदैन र श्रीमतीको गाली खानुपर्छ । त्यसबेला साथीभाईसँग मागेर काम चलाउँछु । मसँग क्रेडिट कार्ड हुन्छ, नेपालका धेरै ठाउँ क्रेडिट कार्डले काम गर्दैन ।
बैंक व्यालेञ्च टन्नै होला है ?
खासै छैन । डेभिडेन्ड आयो भने अलिअलि सेभिङ गर्ने हो । हाम्रा धेरैवटा कम्पनी छन् । सबै कम्पनी नाफामा सञ्चालन हुँदैनन् । त्यसैले नाफा कमाएका कम्पनीले नोक्सानमा गएका कम्पनीको नोक्सान व्यहोर्नु पर्यो । त्यसपछि जति बचत हुन्छ, त्यो रि इन्भेष्टमेन्ट गर्नुपर्यो ।
तपाईको समूहको वार्षिक कारोबार कति हुन्छ ?
धेरै कम्पनीहरु छन्, त्यो त नहेरी भन्न सक्दिन ।
कति पढ्नुभएको छ ?
बैंङ्लोर विश्वविद्यालयबाट व्याजलर अफ इन्जिनियरिङ म्यानेजम्यान्ट गरेको छु ।
बिबाह कहिले गर्नुभयो ?
सन् १९९९ मा ।
लभ कि एरेञ्ज ?
एरेञ्ज हो । तर मैले एरेञ्ज गरेको छ ।
कहाँ भेट्नु नि उहाँलाई ?
बैंङ्लोर मै पढ्दै गर्दा भेटेको । हाम्रो चीनजान भएको ५ वर्षपछि हामीले बिबाह गर्यौं ।
त्यो बेलाको केही कहानी सुनाउनुहोस् न त ?
सुनाउन मिल्नेजति त सुनाउनुहोस् न ?
वास्तवमा भन्दा म र मेरी श्रीमतिको साथीबीच धेरै कुराहरु मिल्थे । उहाँहरुसँग घुमघाम हुन्थ्यो । त्यहीबेलामा श्रीमतिको साथीका माध्यमबाट मैले मेरो श्रीमति चिनेको हुँ । उनलाई चिनेपछि म उनीतिर बिस्तारै आकर्षित हुँदै गएँ ।
प्रेम प्रस्ताब चैं कसरी गर्नुभयो त ?
हाम्रो चिनजान भएको साढे ४/५ वर्षपछि नै हो मैले उनलाई प्रस्ताब गरेको । त्यसअघि हामी साथी साथी मात्रै थियौं । मैले एकैपटक बिबाहको प्रस्ताब गरेँ ।
उहाँको के कुराले तपाईँलाई लोभ्यायो ?
पहिलो आकर्षण त रुप नै हो । जब हामी साथीकोरुपमा नजिक हुँदै गयौं त्यसपछि चैं स्वभावले ।
उहाँसँगको प्रेम तपाइँको दोस्रो कि तेस्रो ?
अहँ मलाई थाहा छैन । किनभने मैले सबैकुरा विर्सिसकेको छु ।
तपाईँ खानको सोखिन कि लाउनको ?
खानकै सोखिन हुँ । लाउनमा मलाई यो त्यो भन्ने छैन ।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महंगो लुगा ?
म खासै महंगो लुगा लगाउँदिन । महंगोमा १५/२० हजारको जुक्ता किनेको छु । म साधारण मान्छे हुँ ।
तपाईँ बाइकको चाहीँ सोखिन हो है ?
बाइक मेरो काम पनि हो र सोख पनि ।
बाइक चढेरै कहाँ कहाँ पुग्नुभयो त ?
जोमसोम पुगेँ । मुक्तिनाथ पुगेँ । श्रीमतिलाई पछि राखेर मनाङ पुगेँ । सामान्य पहाडी र तराई जिललाको त के कुरा गर्नु । अब रारा, लोमाङथान, सगरमाथाको बेसक्याम्प र ह्लासा जान बाँकी छ ।
तपाईँसँग कतिवटा बाइक छन् ?
१५/२० वटा ।
सबैभन्दा महंगो ?
सीबीआर १००० आरआर भन्ने बाइक सबैभन्दा महंगो हो । ५/६ वर्षअघि २८ लाख रुपैयाँमा किनेको । अहिले त ४० लाखजति पर्ला ।
तपाईँसँग भएका सबै मोटरसाइकलको मुल्य जोड्दा कति होला ?
२ करोडजति पर्ला । गाडी पनि छ ७५ लाख रुपैयाँमा किनेको ।
मनपर्ने गीत ?
निर जैले रिसाउने…
किताब कतिको पढ्नुहुन्छ ?
म किताब त्यति पढ्दिन । सामान्यतया म अडियो बुक्सहरु सुन्छु । अहिले त म आफ्नो इन्ट्रेस्टका कुराहरु मात्रै पढ्छु । म फिल्म चाहिँ धेरै हेर्छु ।
म्याडम के गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो समूहको सबै कम्पनीको ब्राण्ड चिफ हो ।
तलब त तपाइँको भन्दा बढी होला है ?
मेरो भन्दा कम छ । किनभने म कम्पनीको अध्यक्ष हुँ नि त ।
(क्लिकमान्डूबाट साभार गरिएको)